जापानमा नेपाली युवाको टिकटक उपद्रो | Nepali In Japan
केही हप्ता अघि जापानको प्रसिद्ध फुड चेन रेष्टुरेन्ट सुकियाले एउटा विज्ञप्ती जारी गर्दै माफी माग्यो । टोकियोको एक ब्राञ्चमा काम गर्ने आफ्ना पार्ट टाइम कर्मचारीले कामकै समयमा मर्यादा विपरित भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गरेपछि भिडियो भाइरल बन्यो । कर्मचारीको गल्तीले ग्राहकहरुमा पर्न गएको असुविधा र आगामी दिनमा त्यसो हुन नदिन सुकिया सञ्चालक कम्पनीले सार्वजनिक रुपमा माफी नै माग्नुपर्‍यो ।
यही हप्ता प्रसिद्ध कन्भिनियन्स स्टोर सेभेन इलेभेनका कर्मचारीले काम गरिरहेकै समयमा बेच्न राखिएको ओदेन (जाडोमा खाइने जापानी खाना) चपस्टिकले निकालेर खाएको र अन्य हर्कत गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेपछि सेभेन इलेभेनले समेत माफी मागेको छ ।
माथिका दुई उदाहरणहरु यहाँनेर जोड्नुको एउटै कारण जापानमा ग्राहक सेवा क्षेत्रका व्यवसायहरुमा पालना गर्नुपर्ने नियमहरुका बारेमा ज्ञान नभएका धेरै नेपाली युवायुवतीहरुको टिकटक उपद्रो हो ।
टिकटक के हो ?
टिकटक के हो भन्ने बारेमा अनभिज्ञ हुनुहुन्छ भने सजिलो तरिकाले बुझ्दा यो फेसबुक जस्तै तर भिडियो मात्र साझेदारी गर्न सकिने मोवाइल एप हो । केही समय पहिलेसम्म म्यूजिकल्लीको क्रेज नेपालीहरुमाझ थियो । सन् २०१७ मा चीनको लोकप्रिय स्टार्टअप कम्पनी ‘बाइटडान्स’ले म्यूजिकल्लीलाई किनेर आफ्नो एप्लिकेशन ‘टिकटक’संग जोडेसंगै यसको चर्चा र प्रयोग थप बढेको हो । उपलब्ध गीतहरुमा लिप–सिङ्क (ओठ चलाएर गाएजस्तो अभिनय गर्ने), रियाक्सन (संगीत वा गीतका आधारमा अभिनय गर्ने) जस्ता कार्यहरु यसमा गर्न मिल्छ जुन १५ सेकेण्ड बराबरको हुन्छ । भिडियोहरुलाई एडिट गर्ने र विभिन्न फिल्टर तथा इफेक्टहरु राखेर आकर्षक बनाउने सुविधा पनि यसले दिन्छ ।
टिकटक भिडियोमा समस्या के ?
सामान्यतयाः टिकटक भिडियो बनाउनु मात्र समस्याको कुरा होइन । टिकटक भिडियोले धेरैलाई मनोरञ्जन, अधिकांशलाई परिचय र केहीलाई कमाई पनि दिएको छ । टिकटकमा बनाएर भिडियो राखेकै कारण चर्चामा आएका नेपाली युवायुवतीहरु पनि धेरै छन् । चर्चामा रहेका ‘सेलिब्रेटी टिकटक भिडियो मेकर’हरुलाई केही ब्राण्डहरुले प्रायोजित भिडियो बनाएबापत पैसा दिने गरेका पनि छन् ।
टिकटकको विश्वव्यापी प्रयोगकर्ता बढिरहेको समयमा जापानबासी नेपालीहरुमाझ पनि यो लोकप्रिय नहुने कुरै भएन । १५ सेकेण्डभित्र आफुलाई मन परेको गीत गाएझै, अभिनय गरेझै वा अरु कसैले बनाएको भिडियोमा ड्उएट (दुईजनाले बनाउने भिडियो) बनाउन पाईने सुविधाले यहाँका युवायुवतीहरुमाझ पनि चर्चा नपाउने कुरै भएन । काम र पढाईले व्यस्त बनाईरहनेहरुलाई यो मनोरञ्जनको राम्रो साधन बन्यो । भिडियो राखेपछि आउने प्रतिक्रियाहरुले झन उत्साह थप्ने नै भयो । धेरैलाई लाग्न सक्छ, टिकटक भिडियो बनाउँदा के नै समस्या हुन्छ र ? हो समस्या हुँदैन तर सही स्थान र सही समयमा सही किसिमको भिडियो बनाएमा मात्र ।
जापानको नियम र नेपाली युवाहरुको उपद्रो
खाना खानेदेखि शौचालय जानेसम्म हरेक पाईला पाईलामा म्यानर (आधारभुत नियम) पालना गर्नुपर्ने जापानमा के-कस्ता स्थानहरुमा भिडियो बनाउन पाईने वा कस्तो व्यवहार देखाउन हुने, नहुने भन्नेबारेमा यहाँका अधिकांश टिकटक प्रयोगकर्ता युवाहरु सचेत नरहेको देख्न सकिन्छ । हुन त अन्य क्षेत्रहरु जस्तै फुड प्रोसेसिङ, हाउसकिपिङ जस्ता नेपालीहरुले धेरै काम गर्ने स्थानहरुमा पनि नियम विपरितका भिडियोहरु बनाएर टिकटक वा त्यसलाई फेसबुकमा अपलोड गर्नेहरु छन् तर विशेषगरी रेष्टुरेन्ट तथा कन्भिनियन्स स्टोरहरुमा काम गर्ने र यस प्रकृतिका भिडियोहरु बनाउनेहरु सचेत हुनैपर्ने बेला आएको छ ।
विभिन्न कन्भिनियन्स स्टोरहरुमा काम गर्दैगर्दा बनाईएका भिडियोहरु टिकटक तथा फेसबुकमा निर्धक्क अपलोड गर्ने युवाहरु धेरै छन् । सार्वजनिक बाटोमा नाच्दै भिडियो बनाएको, यतिसम्म कि ट्रेनभित्र अडिनका लागि माथि हातले समाउने रिङमा झुण्डिएर समेत भिडियो बनाएको भेटिएको छ । केहीलाई म आफैले व्यक्तिगत म्यासेज गरेर हटाउन आग्रह गर्दै सो कुरा बाहिर आयो भने त्यसले दिने परिणामका बारेमा बताएको पनि छु । त्यस्ता भिडियोहरु देखेपछि शेयर गरेर थप भाइरल बनाउनुभन्दा भेट्नुभयो भने म्यासेज गरेर हटाउन भन्नु राम्रो हुन्छ ।
के छ नियम ?
जापानको सार्वजनिक ऐनअनुसार सेवामुखी व्यवसायहरुमा भिडियो वा फोटो खिच्नै नपाईने भन्ने नियम हुँदैन तर व्यवसाय सञ्चालकहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुका लागि तयार पार्ने नियम तथा कानूनहरुमा यि कुराहरु तोकिएका हुन्छन् । काम गर्ने ड्रेस सहितको फोटो तथा भिडियो खिच्न प्रायः सबै कन्भिनियन्स स्टोर तथा रेष्टुरेन्ट लगायतका व्यवसायहरुले बन्देज नै लगाएका हुन्छन् त्यस्तै ग्राहकसंग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर गर्नुपर्ने अन्य स्थानहरुमा समेत काम गरिरहेको समयमा ग्राहकको अनुमति बेगर भिडियो तथा फोटो खिच्न पनि पाइँदैन ।
जापानीहरु व्यक्तिगत विवरण र व्यक्तिगत गोपनियताका मामलामा निकै संवेदनशील हुने भएकाले सामाजिक सञ्जालमा राखिने फोटो तथा भिडियोहरु खिच्ने क्रममा वरिपरिको वातावरण के-कस्तो छ भन्ने पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । ब्यापारिक वा अन्य प्रयोजनका लागि भिडियो खिच्दा पछाडि देखिने मानिसहरुलाई नचिनिने बनाउने चलन जापानमा छ ।
टिकटकमा मात्र नभएर फेसबुक लाइभमा समेत जापानमा रहेका नेपालीहरुले सचेतता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । रेष्टुरेन्टमा खाना खान आएको ग्राहकहरुको अनुमतिबेगर नै लाइभ राख्नु नियमसंगत छैन । व्यक्तिगत गोपनियतालाई निकै महत्व दिईने जापानमा त्यही भिडियो मेरो अनुमति विना किन राखियो भनेर कुनै ग्राहकले प्रश्न उठाउन वा मुद्दा नै हाल्नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।
सर्बप्रथम त यस्ता क्रियाकलापहरु गर्न हुँदैन भनेर स्वयं आफै सचेत रहनुपर्छ । कुनैपनि स्थानमा काम गर्न सुरु गर्नुअघि त्यहाँ गर्न पाईने र नपाईने कार्यहरुका बारेमा बताईन्छ । नबताएका खण्डमा पनि के-कस्ता नियमहरु छन् भनेर आफैले सोध्नु उपयुक्त हुन्छ ।
जापानमा नेपालीहरुको बढ्दो जनसंख्या संगै विभिन्न नयाँ किसिमका समस्याहरु थपिने क्रम जारी नै छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र यसको दुरुपयोगले आउन सक्ने जोखिमका बारेमा सचेतना जगाउनमा पनि सम्बन्धित निकाय तथा यहाँका सामाजिक संस्थाहरुको पहल शुन्यबराबर छ । नाचगानका कार्यक्रमहरुमात्र प्राथमिकतामा राख्नुभन्दा सार्वजनिक हितका विषयहरुमा कार्यक्रमहरु आयोजना गरिनु आवश्यक छ । सामाजिक संजालको प्रयोग, साइबर सेक्युरिटी लगायतका विषयहरु पनि बहसको विषय बनाईन आवश्यक छ ।
देख्दा वा सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ तर यस्ता क्रियाकलापहरुले जापानमा रहेको नेपाली समुदायको गरिमा थप घटाउने छ । भोलिका दिनमा नेपालीहरु पनि यस्ता क्रियाकलाप गरेर पक्राउ परेको हेडलाइन नबनुन् भन्नका लागि तपाई र म दुबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
लेखकलाई फेसबुकमा फलो गर्न यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ ।
Prevजापानको चिसोमा तपाईलाई काम लाग्नसक्छन यि औषधीहरु
Nextयि हुन जापानमा कोठा भाडामा नपाइने मुख्य ५ कारणहरु